Ahoana ny fomba hisafidianana ny haben'ny sisin'ny kodiarana?
Ny sisiny dia tokony hanana savaivony sy savony anatiny mitovy amin'ny kodiarana, misy ny refy tsara indrindra ho an'ny kodiarana tsirairay manaraka ny fenitra manerantany toa ny ETRTO sy ny TRA. Azonao atao koa ny manamarina ny tabilao fametahana kodiarana sy rim miaraka amin'ny mpamatsy anao.
inona ny rim 1-pc?
Rim-1-PC, antsoina koa hoe rim tokana, vita amin'ny vy tokana ho an'ny sisin'ny rim ary namboarina ho karazana profil hafa izy io, ny sisin'ny 1-PC dia mazàna ambanin'ny 25 ", toy ny sisin'ny kamio ny 1- Mavesatra maivana, maivana ary haingam-pandeha ny sisin'ny PC, ampiasaina betsaka amin'ny fiara maivana toy ny traktera fambolena, tranofiara, tele-handler, excavatoran'ny kodia, ary karazan-milina hafa. Mavesatra ny enta-mavesatra amin'ny sisin'ny 1-PC.
inona ny rim 3-pc?
inona ny rim 4-pc?
5-PC rim, antsoina koa hoe rim-dimy, dia vita amin'ny faribolana dimy izay misy ny rim base, peratra fanidiana, seza vakana ary peratra roa. 5-PC rim dia habeny 19.50-25 / 2.5 hatramin'ny 19.50-49 / 4.0, ny sasany amin'ny sisin'ny 51 "ka hatramin'ny 63" dia ampahany ihany koa. Ny sisin'ny 5-PC dia mavesatra, mavesatra ary haingam-pandeha, be mpampiasa amin'ny fanamboarana fitaovana sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany io, toy ny dozers, mpandeha kodiarana lehibe, mpitaingin-tsoavaly, kamio manary ary milina fitrandrahana hafa.
Firy amin'ny karazana forklift rim?
Misy karazana rim forklift maro, voafaritra amin'ny alàlan'ny firafitra izy io dia azo zaraina roa, 2-PC, 3-PC ary 4-PC. Ny sisin'ny sisiny dia kely sy maivana ary ampiasain'ny forklift kely, ny sisin'ny 2-PC dia habe lehibe matetika, ny 3-PC ary ny sisin'ny 4-PC dia ampiasain'ny forklift afovoany sy lehibe. Ny sisin'ny 3-PC sy 4-PC dia kely indrindra sy famolavolana sarotra, saingy mahazaka enta-mavesatra lehibe kokoa sy hafainganam-pandeha ambonimbony kokoa izy ireo.
Inona ny fotoana mialoha?
Matetika izahay dia mamita ny famokarana ao anatin'ny 4 herinandro ary afaka hanafoana ny 2 herinandro raha tranga maika izany. Miankina amin'ny toerana halehany ny fotoana fitaterana dia afaka manomboka amin'ny 2 herinandro ka hatramin'ny 6 herinandro, noho izany ny fotoana fitarihana rehetra dia 6 herinandro ka hatramin'ny 10 herinandro.
Inona no tombony HYWG?
Izahay dia mamokatra tsy ny rim feno ihany fa koa ny singa rim, dia manome ho an'ny OEM manerantany toa ny CAT sy Volvo ihany koa izahay, noho izany ny tombony azonay dia vokatra feno, Rindrambaovao Indostrialy rehetra, kalitao voaporofo ary R&D matanjaka.
Inona ny fenitry ny vokatra arahinareo?
Ny sisin'ny OTR dia mihatra ETRTO sy TRA manerantany.
Inona no karazana hosodoko azonao atao?
Ny sary voalohanay dia E-coating, ny sary hosodoko ambony dia vovoka sy loko mando.
Firy ny singa misy ny rimanao?
Manana peratra hidy, peratra sisiny, seza vakana, fanalahidy mpamily ary flange izahay ho an'ny karazan-tsivana samihafa manomboka amin'ny habe 4 "ka hatramin'ny 63".